Apple Watch Series 4 ine electrocardiogram | Ndinobva mac
Electrocardiogram muApple Watch Series 4 hongu, asi kuSpain haisati
Dai isu taitove tichifara nezvekuuya kweApple Watch Series 4 muSpain neiyo 4G kana LTE mashandiro, isu takave tichifara zvakanyanya patakakwanisa kuongorora izvozvo Iyo Apple Watch inoenderera ichichinja munzira kwayo, iyo yekudzora hutano hwedu.
Apple inoenderera ichitora nhanho diki kusvika mashandiro eApple Watch uye ndeyekuti sekuvandudzwa kwesystem yayo yeWOSOS, data rakawanda ratiri kudzidza pamusoro pekuvandudzwa kwakaisirwa neApple maererano nekuonekwa kwekufamba. mimwe mitambo kana kuiswa kwema electrode kuti vakwanise kuita maelectrocardiograms.
Kana isu tikatarisa kune zvakasarudzika izvo apuro inoratidza zvine chekuita neiyi nyowani mashandiro, isu tine kuti iyo electrocardiogram basa rawana iyo De Novo kufanira muDFA, izvo zvisiri kureva neimwe nzira kuti mudziyo uyu haukonzere kukuvadza mushandisi anoishandisa. Parizvino zvese zvinotaridzika zvakanaka chaizvo uye ndezvekuti kunyangwe kumashure kwe Apple Watch izvozvi zvakagadzirwa neakakosha zvedongo zvinhu.
Iyi nyowani EKG ficha inoshanda nekuisa chigunwe pane yako nyowani yedhijitari korona uchipfeka wachi. Mune isingasviki mineti iwe unenge wave kukwanisa kuziva yako yekurova kwemoyo uye panguva imwechete kuziva kana chakaringana.
Nekudaro, hazvisi zvese zvinogona kuve zvakanakisa uye, zvirinani kuSpain iri basa nyowani hariwanikwe kusvika kupera kwegore rino kana kusvika muna2019, zvichienderana nezvibvumirano zvinofanirwa kutorwa neSpain. Saka kana iwe wanga uchifunga nezve kutenga iyo Apple Watch Series 4 chete yeiyo EKG, Ramba uchifunga kuti hauchakwanise kuishandisa izvozvi.
Isu tinofanirwa kutaura kuti kunyangwe zvisati zvave kuwanikwa kuSpain kuti zvishandiswe, hazvireve kuti havasi kushanda zvizere. Iko hakuna akasiyana mamodheru ane kana asina ma electrode.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Electrocardiogram muApple Watch Series 4 hongu, asi kuSpain haisati
Cello GV akadaro
Fernando Ismael Olmedo Cabriza
Pindura Chelo GV
Podcast 10 × 02: Iyo nyowani iPhone iri pano, uye iyo Apple Tarisa futi
Iyo Apple Watch Series 3 zvakare inowedzera iyo Cellular sarudzo